အမွှေးအတောင်ရှိ‌သော၊ ဥ ဥတတ်သော၊ ပျံသန်းတတ်သော ကျောရိုးရှိသွေးနွေးသတ္တဝါ
ကားလ် လင်းနီးယပ် (Linnaeus), 1758
ငှက် (မျိုးပေါင်း Aves) သည် အမွှေးအတောင်ရှိ၍ အတောင်ပံ နှစ်ဖက်ရှိသော သွေးနွေးသတ္တဝါအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သည်။ သို့သော် အားလုံး ပျံသန်းနိုင်စွမ်း မရှိကြပေ။ အချို့ငှက်များသည် အလွန်အပြေးသန်သူများဖြစ်ကြပြီး အချို့ကတော့ အလွန်ရေကူး ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ငှက်သည် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါဖြစ်ပြီး ဥ,ဥတတ်သော သတ္တဝါအမျိုးအစားလည်း ဖြစ်သည်။ ဥက ပေါက်ဖွားလာသော ကလေးငယ်များကို စောင့်ရှောက်လေ့ ရှိကြသည်။
အသက်ရှင်နေထိုင်လျက် ရှိသော ငှက်အမျိုးကွဲပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများတွင် မျိုးကွဲအများဆုံးရှိသော တက်ထရာပေါ့ဒ်(tetrapod) အမျိုးအစားလည်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အာတိတ်မှ အန္တာတိတ်အထိ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (ecosystems) အမျိုးမျိုးတွင် ပျံနှံ့နေထိုင်ကြသည်။ ငှက် များ၏ အရွယ်အစားမှာ ၅ စင်တီမီတာ(၂ လက်မ)မျှသာရှိသော ဘီးဟမ်းမင်းငှက် (Bee Hummingbird) မှသည် ၂.၇ မီတာ(၉ ပေ) အထိရှည်သော ငှက်ကုလားအုတ်အထိရှိသည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်းများအရ ငှက်များသည် သယ်ယိုပေါ့ဒ် ဒိုင်နိုဆောများမှ ဂျူရက်ဆစ်အချိန်ကာလမှ စ၍ဆင်းသက်လာသည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး နှစ်ပေါင်း သန်း ၁၅၀ မှ သန်း၂၀၀ ခန့်တွင်ဖြစ်သည်။ နိခါတကဗေဒပညာရှင်အများစုက ငှက်တို့သည် Cretaceous–Tertiary မျိုးတုံးခြင်း အဖြစ်အပျက်အတွင် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဒိုင်နိုဆောတို့၏ တစ်ခုတည်းသော အဆက်အနွယ်များအဖြစ် ယူဆကြသည်။
၆ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအရ ကွဲပြားသွားသော ငှက်မျိုးစဉ်များ
၈ ငှက်၏ စီးပွားရေးအကူအညီ
၉ လူ၏ ရန်သူငှက်များ
၁၂ ငှက် 'လူပျိုလှည့်'ပုံ
၁၃ ငှက်၏ တေးသံ
၂၀ ငှက်၏ အသွေးအရောင်
ငှက်သည် အဘယ်ကြောင့် ပျံနိုင်သနည်းပြင်ဆင်
သဘာဝသည် ငှက်၏ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းကို ကောင်းကင်၌ ပျံသန်းနိုင်စေရန် ဖန်တီးထား၏။ ငှက်၏ စကယ်လီတန်တို့ကို ကြည့်လေ။ ငှက်ရိုးတို့သည် ကျစ်လျစ်၏။ အခေါင်းရှိ၏။ ပေါ့ပါး၏။ ငှက်ကျောရိုး အဆစ်များသည် ပေါင်းစပ်နေသဖြင့် ကျောရိုးသည် မြီးထူးရိုးနှင့်လည်း နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်တည်ရှိသည်။ ထို့ပြင် အခြားအရိုးတို့မှာ ငှက်၏ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံး အပေါ်၌ ပေါင်းကူးကဲ့သို့ အထပ်ထပ်ဖွဲ့၍ နေသဖြင့် ကိုယ်ထည်မှာ တောင့်တင်းခိုင်မာပါလျက်နှင့် ပေါ့ပါး၍ နေပေသည်။ လေယာဉ်ပျံတွင် လေးလံသော စက်ကိရိယာနှင့် ခရီးသည်တို့ကို ဟန်ချက်အနီးအနားတဝိုက်၌ ထားရှိရသည်။ ထို့အတူ ငှက်၏ လေးလံသော ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းပါသည့် ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးသည် ဟန်ချက်တဝိုက်၌သာ တည်ရှိသည်။ ပေါ့ပါးသော အင်္ဂါများကို ဦးခေါင်း၊ အမြီး၊ အတောင်နှင့် ခြေထောက်တို့ကား ဟန်ချက်ဖြင့် ဝေးရာတွင် တည်ရှိပေသည်။ ထိုပေါ့ပါးသည့် အင်္ဂါများကို လှုပ်ရှားစေသော အသားစိုင်မှာ ကိုယ်ထည်နှင့်သာ ဆက်စပ်လျက်ရှိပေသည်။ အသားစိုင် အများဆုံးအပိုင်းမှာ ပေါင်ပိုင်းသာဖြစ်၍ ငှက်ကိုယ်ထည်၏ ဟန်ချက်နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေသည်။ ပေါင်အောက်ဘက်ရှိ ခြေတံမှာ သေးသွယ်ရှည်လျားသော အရိုးချောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရိုးနှင့် ခြေချောင်းကလေးများသည် ဆက်နေသည်။ ခြေပိုင်း၌ အများအားဖြင့် အမွှေးအတောင် မရှိချေ။
ငှက်နှင့် တွားသွားသတ္တဝါတို့၏ ခြားနားချက်ပြင်ဆင်
ငှက်တို့သည် သွေးနွေးသတ္တဝါများ ဖြစ်လာကြသဖြင့် သူတို့၏ အမူအကျင့် အလေ့အထလည်း ပြောင်းလဲလာရသည်။ ငှက်ဥနှင့် ငှက်ငယ်များအတွက် အပူချိန်သည် တစ်သမတ်တည်း ညီရမည်ဖြစ်၍ ငှက်တို့သည် အသိုက်လုပ်ရသည်။ ဥအုပြီးနောက် ဝပ်ရသည်။ သွေးနွေးသတ္တဝါ ဖြစ်သည့်အလျောက် ဆောင်းဥတု၌ နွေးသောဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ငှက်တို့၏ ကိုယ်တွင်း အပူသည် လူတို့၏ကိုယ်တွင်းအပူထက် ပြင်းသည်ဖြစ်၍ အစာအကြေမြန်သည်။ ထို့ကြောင့် မနေမနား အစာ ရှာရသည်။ ငှက်၏ ခေါင်းခွံမှာ ပါး၍ မေးရိုးမပါရှိချေ။ သွားလည်း မရှိချေ။ အစာကို ကြေညက်အောင် ဝါးရသည်ဟု မရှိသောကြောင့် ငှက်၏ ဝမ်းတွင်းရှိ အမြစ်သည် အစာချေဖျက်နိုင်ရန် အလုပ်ကို လုပ်ပေးရလေသည်။
ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအရ ကွဲပြားသွားသော ငှက်မျိုးစဉ်များပြင်ဆင်
"Braun & Kimball (2021) " သုတေသနစာတမ်းအပေါ်အခြေခံ၍ မျိုးရိုးဆင်းသက်မှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲသွားပုံအရ မျိုးစိတ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား နီးစပ်သော မျိုးရိုးဆက်နွယ်မှုကို ပြထားသော မျိုးရိုးဇယားဖြစ်သည် -
ငှက်တို့သည် အလွန်မျက်စိရှင်ကြ၏။ ကြည်လင်ထက်မြက် သော မျက်လုံးများသည် ခရီးဝေးကို မြင်နိုင်ကြသည်။ ထို့အပြင် လေထဲ၌ အဟုန်ပြင်းစွာ ပျံသန်းနေသည်ဖြစ်စေကာမူ အလားတူ လျင်မြန်စွာ ပျံသန်းနေသော ပိုးမွှားတို့ကို မျက်ခြည်မပြတ် မြင် နိုင်စွမ်းရှိ၏။ လင်းယုန်ငှက်နှင့် လင်းတငှက်ကဲ့သို့ ငှက်ရဲများ သည် အလွန်မြင့်သော ကောင်းကင်အရပ်၌ ပျံဝဲကာ နေရာမှ မြေပြင်ပေါ်တွင်ရှိသည့် သေးငယ်သော အစာကောင်ကို မြင် သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အဟုန်ပြင်းစွာနှင့် စိုက်ထိုး သုတ်ယူ တတ်ကြသည်။ ထို့အပြင် ဤငှက်ရဲတို့တွင် မျက်ခွံလွှာအပို တစ်ထပ်ပါရှိသဖြင့် မျက်စိကို အလင်းရောင် မစူးနိုင် အောင် မျက်ခွံလွှာကို လိုသလို ရှုံ့ချည်ပိတ်ချည် ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် တင်းတိမ်ဖြင့် ကာသကဲ့သို့လည်း ကာထားနိုင်၏။ ထိုမျက်ခွံလွှာ အပိုကို မှိတ်ထားစေကာမူ မြင်နိုင်သောအစွမ်း ရှိသည်။ ထို့အပြင် ခရီးဝေးနီးတို့ကိုလည်း ပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်အောင် မျက်စိကို ချိန်နိုင်ကြသည်။
ငှက်တို့၏ အကြောင်းခြင်းရာကို သုတေသနပြုသူ ပုဂ္ဂိုလ် အမြောက်အမြား ရှိလေသည်။ ငှက်တို့ကို တမင်သက်သက် အလှမွေးမြူသူတို့လည်း ရှိ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကျေးဇူးကြောင့် ငှက်အကြောင်းကို စနစ်တကျ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိရပေသည်။ ငှက် တို့၏ သီချင်းသံနှင့် အရောင်အဆင်းတို့ကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း အလုပ်သည် သဘာဝနှင့် နီးစပ်သော အလုပ်ဖြစ်၍ အလွန်စိတ် ကြည်လင်စေသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း၌ သစ် ပင် ပန်းမာလ်များ စိုက်ပျိုးပေးထားခြင်း၊ ငှက်အိမ်များ ဆောက် လုပ်ပေးထားခြင်း စသည်ဖြင့် ငှက်အပေါင်းတို့ လာရောက် နေထိုင်စေရန် ငှက်မွေးမြူသူတို့က ဖန်တီးပေးလေ့ရှိသည်။ ငှက် သုတေသီတို့မှာ တောတောင်ရေမြေတို့ကိုလှည့်လည်၍ ငှက်တို့ ၏ အမူအကျင့်ကို လေ့လာကြသည်။ ငှက်အမျိုးအစားကိုလိုက်၍ ငှက်စားကျက် အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အချို့ငှက်တို့သည် သစ်တော၊ ခြံကြီး၊ ဥယျာဉ်များကြီးထဲတွင် ကျက်စားသည်။ အချို့မှာ အင်းအိုင် ချောင်းမြောင်းအရပ်ကို မှီ၍ နေကြသည်။ အချို့ကားလယ်ကွင်းများ၊ မြက်ခင်းများ၌၎င်း၊ တောင်ကုန်းများ၌၎င်း အစာရှာဖွေကြသည်။
ငှက်တို့သည် သာမန်အားဖြင့် အဖိုတစ်ကောင်လျှင် အမ တစ်ကောင်နှင့်သာ တစ်နှစ်အတွင်း စုံဖက်ပေါင်းသင်း၍ နေလေ့ ရှိသည်။ သို့သော် ကြက်မျိုးတွင်အပါအဝင်ဖြစ်သည့် ကြက်ဆင်၊ ရစ် စသည့်ငှက်တို့သည် အဖိုတစ်ကောင်လျှင် အမများစွာနှင့် ပေါင်းသင်းသည်။ ဤကဲ့သို့ အမပေါင်းများစွာတို့နှင့် ဆက်ဆံ လေ့ ရှိသော အခြားငှက်မျိုးများမှာ နှံပြီစုတ်နှင့် ဗလက်ဗတ် ခေါ် ငှက်မည်းများ ဖြစ်လေသည်။ ဥဩငှက်တိုသည် အခြား ငှက်သိုက်များ၌ အု၍ ထိုဥများမှ ပေါက်ပွားလာသော သားငယ် များကိုလည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လေ့ မရှိကြသဖြင့် တစ်နှစ် တစ်ရာသီအတွင်း၌ပင် အဖော်အလဲလဲဖြင့် ပေါင်းဖက် ကြလေ သည်။ အမေရိကတိုက် အပူပိုင်းဒေသများတွင် တွေ့ရသော အန်နစ်ခေါ် ငှက်တစ်မျိုးသည် ငှက်မများစွာ ဥအုနိုင်ရန် အသိုက် တစ်ခုတည်းကို ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောက်လုပ်လျက် ပေါက်လာ သမျှသော သားငယ်တို့ကိုလည်း အားလုံးဝိုင်း၍ စောင့်ရှောက် ကြလေသည်။
ငှက်တို့တွင် အသံထွက်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တည်ရာသည် လူတို့တွင် ထိုကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းတည်ရာနှင့် ကွာခြား သည်။ လူတို့တွင် လေပြွန်အထက်ဖျား၌ သံစုံထွက်နိုင်သည့် အကြောစုများ တည်ရှိသော်လည်း ငှက်များ၌မူ အသံထွက် အမြှေးများမှာ လေပြွန်၏ အောက်စွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုအမြှေးစု အသွင်အပြင်နှင့် အမြှေးစုကို ချုပ်တည်းထားသော အကြောများမှာ ငှက်တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးတွင် ကွဲပြားနေသည် ဖြစ်၍ အသံတစ်မျိုးစီ ထွက်ကြသည်။ ငှက်တို့သည် တေးသီဆိုသည့်အပြင် အခြားအသံများကို လည်း အော်မြည်တတ်ကြသည်။ သစ်တောက်ငှက်များသည် မာသော နှုတ်သီးဖြင့် သစ်ခေါက်ကို ထိုးခေါက်နေသည့်အခါ ပလုပ်တုတ်အသံမျိုးကို ကြားရ၏။ ဂရောက်ရစ်ငှက်တို့ကလည်း လေကို အတောင်ပံများဖြင့် ပြင်းပြင်းရိုက်ခတ်၍ စည်တီးသံမျိုး ကို ထွက်ပေါ်လာစေသည်။ စနိုက်ငှက်မျိုးသည် လေထဲသို့ မြင့်စွာ ပျံတက်၍ အောက်သို့ ထိုးစိုက်လိုက်သည့်အခါ အမြီး ၏ အပြင်ဘက် အတောင်နှစ်ခုမှာ အရှိန်ကြောင့် လှုပ်ခါသွား သဖြင့် အသံဖြစ်ပေါ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အသိုက်
ငှက်တို့သည် တွားသွားသတ္တဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာခါ စတွင် လိပ်နှင့် ဖွတ်တို့ကဲ့သို့ ဥကို မြေပြင်၌အု၍ သဲဖုံး၍ ဖြစ်စေ၊ သစ်ခေါင်းတွင်ထည့်၍ဖြစ်စေ ထားကြသည်ဟု အဆို ရှိသည်။ သို့သော် သွေးအေးသတ္တဝါမှ သွေးနွေးသတ္တဝါ အဖြစ် သို့ ပြောင်းလဲသောအခါ၌မူကား၊ သားကောင် ပေါက်ပွားစေရန် ဥကို အပူရှိန် တစ်သမတ်တည်းပေးဖို့ လိုလာသည်။ ထို့ကြောင့် ဥကို ဝပ်ပေးရန် အသိုက်လိုလာလေသည်။ ဦးစွာ၌ ငှက်တို့သည် အဆင်သင့်ရာမြေပေါ်၌ ဥအုကြသည်။ ဝပ်ကြသည်။ နောင်အခါ၌ ဥများမြေကြီးပေါ်တွင် လိမ့်မသွားစေရန် မြေကိုယက်ဖော်၍၎င်း၊ မြေချိုင်တွင်း၌ သစ်ခက်သစ်ရွက်ဖို့၍ ၎င်း အသိုက်လုပ်ပြီးမှ ဥအုတတ်ကြသည်။ တစ်ဖန်မြေကြီးသည် အပူအအေး အစိုအခြောက်ဟူ၍ ခဏခဏ ပြောင်းလဲတတ် သောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ကုန်းသတ္တဝါများက အန္တရာယ်ပေး တတ်ကြသောကြောင့် တကြောင်း မြေပြင်မှ မြင့်ရာအရပ်တို့တွင် ငှက်တို့အသိုက်ဖွဲ့လာကြပြန်သည်။ ဤသဘောအတိုင်း ငှက်သိုက်တို့၏ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြပုံကို ယနေ့ မြင်တွေ့ကြရသော အသိုက်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် သိအပ်သည်။ ဗျိုင်းနှင့် ခိုတို့သည် အသိုက်ကို တုတ်တံငယ်ဖြင့် ပြီးစ လွယ်လုပ်ကြသည်။ ကျီးနှင့် သိမ်းငှက်တို့သည် အသိုက်ထဲ၌ ဥကျင်းနက်နက်ကို အတွင်းသားနုနုတထပ်ခံ၍ တည်ကြ သည်။ အသိုက်လုပ်ပုံ အဆင့်အတန်း မြင့်သောငှက်မှာ စာဗူးတောင်းများဖြစ်သည်။ စာဗူးတောင်းသိုက်များမှ ဗူးတောင်းကို စောက်ထိုးထားဘိသကဲ့သို့ ရှိသည်။ မြက်ခြောက်၊ လျှော် စသည်တို့ဖြင့် သိုက်မြိုက်စွာ အသိုက်လုပ်တတ်သည်။ အသိုက်လုပ်ရာ၌ ငှက်ဖိုသည် အသိုက်လုပ်ရန်သင့်သော အရပ်ကို ရွေးသည်။ ငှက်မသည် အသိုက်လုပ်ရန်နေရာ အတိအကျကို ရွေးသည်။ ထိုနောက် ငှက်ဖိုနှင့် ငှက်မတို့သည် အသိုက် လုပ်ရန် မြက်၊ သစ်ရွက်၊ သစ်ကိုင်း အမွှေးအတောင်၊ ကျူပင်၊ ကျူရိုး စသည်တို့ကို ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ လိုက်လံ၍ စုဆောင်းသည်။ ငှက်မအသိုက်ဖွဲ့သည့်အခါ ငှက်ဖိုသည်ရန်သူ မလာစေရန် ကာကွယ်ပေးရသည်။
ငှက်တို့သည် တစ်နေ့လျှင် ဥတစ်လုံးကျ ဥအုစမြဲဖြစ်သည်။ ဤသို့လျှင် ငှက်မျိုးအလိုက် ဥရသော အရေအတွက်ပြည့်သည် အထိ အုလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဥများနှင့် ထိုဥများမှ ပေါက် ပွားလာသည့် ငှက်ကလေးတို့အား ရန်ရှာဖျက်ဆီးမည့် ဘေး အန္တရာယ်အနည်းအများကိုလိုက်၍ အရေအတွက်မှာ တစ်သမတ် တည်း မရှိတတ်ချေ။ အလွန်မြင့်မားသော ကျောက်တောင် စောက်များတွင် ဥအုလေ့ရှိကြသည့် ပင်လယ်ငှက်များစွာတို့သည် တစ်မြုံတွင် တစ်လုံးချင်းသာ အုလေ့ရှိကြ၍ လူတို့ လိုက်လံ ပစ်ခတ်လေ့ရှိသော ရေကြက်ကဲ့သို့ ငှက်မျိုးတို့တွင် ဖျက်ဆီး မည့် ရန်သူပေါများသဖြင့် တစ်မြုံလျှင် ဥပေါင်း ၁ဝ လုံးမှ အလုံး ၂ဝ အထိ ဥအုတတ်ကြသည်။ ငှက်များစွာတို့တွင် တစ်မြုံလျှင် ဥ ၃ လုံးမှ ၅ လုံးအထိ ဥအုတတ်ကြသည်။ ငှက်တို့၏ ဥအရွယ်အစားမှာ ပဲစေ့ထက်ယောင်ယောင်မျှ ကြီးသော ပိတုန်းငှက်ဥအရွယ်မှသည် အချင်းအားဖြင့် ၅ လက်မနှင့် ၆ လက်မကြားရှိ ငှက်ကုလားအုပ်ဥအရွယ်ထိ ရှိ လေသည်။ အလွန်အရွယ်အိုနေသော အိမ်ကြက်မများသည်၎င်း၊ ဥအုချိန် ကုန်ဆုံးခါနီးတွင် အုသောငှက်တို့သည်၎င်း အလွန် သေးငယ်သော ဥများကို အုတတ်ကြပေမည်။ ရံဖန်ရံခါ ဥခွံ တစ်ခုထဲတွင် ဥ ၂ လုံးစာ ၃ လုံးစာ၊ အနှစ်များ စုဝေး တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုဥများကို အမြွှာပူးဥများဟု ခေါ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ငှက်ကောင်ကြီးလျှင် ဥများ လည်း ကြီး၍ ငှက်ကောင်ငယ်လျှင် ဥလည်း ငယ်လေသည်။ သို့သော် ပေါက်ခါစတွင် မျက်စိမပွင့်၍ မလှုပ်ရှားနိုင်သော ငှက်မျိုး၏ ဥများသည် ပေါက်ခါစတွင် လှုပ်ရှားသွားလာ နိုင်သော ငှက်မျိုး၏ ဥထက် ငယ်တတ်၏။ အများအားဖြင့် ငှက်တို့သည် နောက်ဆုံးဥကို အုပြီးနောက် အသိုက်ထဲတွင် ဝပ်ရတော့သည်။ ဇီးကွက်ကဲ့သို့ အချို့ ငှက် တို့မှာ ပထမဆုံးဥကို အုပြီးသည်နှင့်စ၍ ဝပ်ကြသဖြင့် ဥများမှ အကောင်ငယ်တို့၊ ရက်ခြားပေါက်လာကြသည်။ ငှက်တို့တွင် အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာသည်အထိ ဝပ်ရသည့် အချိန်မှာ ဥအရွယ် အကြီးအသေးကိုလိုက်၍ ရက်ကြာသည်။ သို့သော် အရွယ်ပင်ငယ်သော်လည်း အရွယ်ကြီးသော အချို့ငှက်ဥများ ထက် အချိန်ကြာကြာဝပ်ပေးမှ အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာ သည်လည်း ရှိသေးသည်။ လည်ဖြူရစ်ငှက်ဥများသည် ၁၂ ရက်၊ သပိတ်လွယ်ဥများသည် ၁၄ ရက်၊ ပိတုန်းငှက် ဥများ သည် ၁၅ ရက်၊ ကြက်ဥများသည် ၂၁ ရက်၊ ဝမ်းဘဲဥများ သည် ၂၇ ရက်၊ ငန်းဥများသည် ၃၅ ရက် စသည်ဖြင့် အကောင်ပေါက်ရန် ကြာမြင့်လေသည်။ ငှက်ကလေးများ ပေါက်ဖွားလာရန်အတွက် ဥများကို ငှက်ကြီး၏ ကိုယ်ငွေ့ဖြင့် အပူရှိန် တစ်သမတ်တည်း ရှိစေရမည့်အပြင် ဥများကို မှန်မှန် လှန်လှောပေးရသည်။ ထို့ပြင် အတွင်း၌ရှိသော သန္ဓေသား အသက်ရှူနိုင်ရန် ဥခွံကို စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်အောင် မကြာခဏ ပြုလုပ်ပေးရသည်။ သို့မှသာ ဥခွံတွင်ရှိသော အပေါက်ငယ်များ ပွင့်နေမည်ဖြစ်၍ ပြင်ပမှလေနှင့် အစိုဓာတ်သည် အတွင်း အမြှေးထပ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပေမည်။ ငှက်တို့တွင် ငှက်မများ သာ ဥများကို ဝပ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် အချို့ငှက်များတွင် များသေားအားဖြင့် အမများကဲ့သို့ အရောင်အဆင်းမွဲသော ငှက်ဖိုတို့သည် ငှက်မများနှင့် တွဲဖက်၍ ဥဝပ်သည့်တာဝန်ကို ယူကြသည်။ ငှက်မတို့ထက် ငှက်ဖိုများက အချိန်များစွာပို၍ ဝပ်ပေးရသော ငှက်မျိုးလည်း အနည်းငယ်မျှ ရှိသေးသည်။
↑ "Morphological Clocks in Paleontology, andaMid-Cretaceous Origin of Crown Aves" (May 2014). Systematic Biology 63 (1): 442–449. Oxford Journals. doi:10.1093/sysbio/syt110. PMID 24449041.
↑ Brands၊ Sheila (14 August 2008)။ Systema Naturae 2000 / Classification, Class Aves။ Project: The Taxonomicon။ 11 June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Data types and the phylogeny of Neoaves" (2021). Birds 2: 1–22. doi:10.3390/birds2010001.
↑ Boyd၊ John (2007)။ NEORNITHES: 46 Orders။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်&oldid=714679" မှ ရယူရန်
၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။